GAYYAA TAATEE -
Karaa kee barreen gaddaa,
Kan fardeen saddeet yaatuu
Xurree kee kan baranaa,
Kan harreen sagal baattuu
Gaammee kee barasii,
Qeerroo sarbaan gindilchaa
Foollee kee saranaa,
kunoo qimboo gangalchaa.
Allaattiin gaara Roggee,
Salaal gadi hin qaariituu,
Ruumechii bara kanaa
Quufeeraa ‘n tarkaanfatuu.
Goolfa kee yaa goflolaa,
Raqni baayyete jedhuu
Gootaa koo yaa Guutamaa,
gadheen alba’e jedhuu.
Hin quufnee, Gadaat dheeratee,
Beelleen ammas nu nyaatee.
Lallabdee na waamta jedhuu,
Sagaleen kee qallaadhaa
Kaakkaaf Baatuu hin bahuu,
Walal irraan dhagayuu.
Muldhataaf Diimtuun gadoo dhaa
Korommiin achirraa bobba’uu
Amma ya garaa kalee.
maalif yaadan rarra’uu.
Nama kee garaan jabaa dhaa,
Kiyyaahoo garaan dhadhaadhaa.
Dhadhaan bara Waaqni yaandee
Aannan bara saawwi mirgitee
Qaccisatu laloo dhaa argitee
fuulatu daaloon fakkaatuu
jorroheet, argaan fakkii dha,
Jorgatee, muraan sakaalii,
falli koo, duwaan qaxii dha.
Horri kee bishaan tahee,
Sangaa furdisuu didee,
Haroon kee malkaa tahee,
Kan burquun irraa guutee
Harmeen too gayyaa taatee
akka sabuu haatiirraa duutee.
29-11-2015 18:27:45 PM